SuitelifeSystems 'Nleba Anya & Nlekọta Ọhụrụ Maka Ndị Mgbasa Ozi | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Mgbasa Ọhụụ nke SuitelifeSystems Maka Ndị Mgbasa Ozi
Ọ bụghị ngbadosi nke ọdịnaya ahụ ka etinyere ọdịnaya nke onye mgbasa ozi mepụtara. A na-ekpebikwa ya site n'ihe ngosi a na-ahụ anya. Etu esi otu okike na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi rute ma nwee ike iwulite ndị na-ege ntị, bụ nke ọma etu esi egosiputa akara ha nke ọma, ọ bụ ya mere nyochaa ya ji dị mkpa. Systems SuiteLife A maara nke ọma maka ịnye mpaghara niile nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere Ngwọta Usoro Mgbasa Ọgbara Ọgbara. N’ezie, nke ha kachasị ọhụrụ Mgbasa Ozi Na-ahụ Maka Nlekọta & Mgbasa Ozi, GPX-32 Pro, bu ndi oru mgbasa ozi choro iji meziwanye ihe diri ha.
Banyere SuiteLife Systems
Maka ihe karịrị 20 afọ, Systems SuiteLife esorola na ụlọ ọrụ teknụzụ ndị a ma ama rụọ ọrụ na nkesa nke ngwanrọ na-enweta ihe mmuta Axess nke emebere maka nlezianya, njikwa, na njikwa akụrụngwa na saịtị ndị dịpụrụ adịpụ na netwọk. SuiteLife Systems ' Ngwọta gụnyere studio / akụrụngwa, njikwa ụlọ nchekwa / green (“BMS”), RF / nnyefe / microwave, na sistemụ nchịkwa ike, nke edepụtara maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na telefon. Companylọ ọrụ ahụ na-enyekwa mmepe software, nyocha IT, yana nkwado 24/7.
SuiteLife Systems ' SLS ngwanrọ ngwanrọ SLS lekwasịrị anya na scalability, ike mgbanwe, iji ya, yana njikwa ya. Akụrụngwa ahụ na-enye TV na Redio Mgbasa ozi zuru oke nke nlekota na njikwa njikwa ya na mmegharị enweghị atụ. Nke a sitere na nlele dị mfe nke otu saịtị dịpụrụ adịpụ ruo na NOC nke na-achịkwa ọtụtụ narị saịtị, nyochaa ọtụtụ puku ihe nlele data, SLS na-egosi, zụta ya otu mgbe ga-ejikwa, nyochaa, na ịchịkwa ụwa nke ịgbasa ozi ruo ọtụtụ afọ. , ọ bụghị naanị ọnwa. Ma ugbu a, ha na nke ọhụrụ GPX-32 Pro Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi & Nlekọta Mgbasa Ozi, ndị mgbasa ozi ga-enwe oge dị mfe iji jikwaa ọdịnaya ha.
Systems SuiteLife GPX-32 Pro
Ihe na-eme GPX-32 Ọ bụ ihe dị mkpa maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, bụ na ọ bụ ihe ekara ụwa niile ka emebere iji kwado 32 ụzọ nke analog, ọkwa (site na opto kewapụrụ), na ijikwa (site na kọntaktị ibugharị) n'otu mpaghara. Nke a kwa Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi & Nlekọta Mgbasa Ozi sụgharịrị Ntinye Ntinye na Nsonye Izugbe (“GPI / GPO”) na TCP / Ethernet iyi nke nhazi maka iji ya na Axess Ngwanrọ.
Otu Axess usoro nwere ike idokwa ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke GPX-32 nkeji, nke na-enye ohere maka ịgbatị GPIO ebughi oke. Na GPX-32 jikọtara site na Ethernet, nke a pụtara na enwere ike ịwụnye ya ma ọ bụ mpaghara ma ọ bụ n'akụkụ nke nnabata ahụ Axess sistemụ eji arụ ọrụ ngbanwe.
N'ihi na GPX-32 bụ "n'ezinụlọNgwaọrụ, ndetu ozi sitere na ngwaọrụ dị ka ihe mmetụta ọkụ, olu mkpu ụzọ, na ọkụ ọkụ. Ọzọkwa gụnyere n'ime GPX-32 arụ oruru / udu mmiri, ebe nchekwa, na elele ọkụ elektrik DC na arụ ọrụ 110 / 240AC na 20-60VDC.
The GPX-32 nwere Punch Down Panel (PDP), nke a na-eji mee ka njikọ nke ngwa ihe ngagharị na ntanetị dị na ya. Ngalaba ahụ nwere eriri 4, 2 x SCSI 50pin, yana 2 x SCSI 68pin, nke na-ejikọ n'etiti GPX-32 na ntinye interface. Na Punch Down Panel PCB nwere eriri 110, njikọ SCSI na jumpers. A na-etinye PCB n’elu eriri igwe 2RU iji nye ohere maka ịkwanye mfe n ’ọkọlọtọ 19 ″ EIA.
Atụmatụ ndị ọzọ nke GPX-32-agụnye:
Otu ihe eji eme ihe onyonyo nke nwere SLSWebControls ngwa ihe nlere anya nke ihu anya nke nwere onodu, njikwa, na onwa di otutu ihe.
Nlekọta SNMP wuru nke ngwa ụlọ ọrụ mpaghara
Ping nlekota ngwaọrụ ngwaọrụ netwọrụ
Oti mkpu / ihe omume sitere na ọnyà SNMP, email na RESTful API
Automation nke ọdịda-overs, akụkọ na mmejọ njikwa
Ndakọrịta zuru oke na SLSControls dị adị Axess Usoro Management
Maka ozi ọzọ na GPX-32, nleta www.suitelifesystems.com/gpx-32/.
SuiteLife Systems na Mgbasa Ozi
Ihe na - eme ụlọ ọrụ mgbasa ozi pụrụ iche abụghị naanị n'ụdị dị iche iche nke okike na ọdịnaya dị n'ime ya. Ma e wulite ntọala ma tolite site na mkpa maka ọganihu. Enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka ọrụ nke ụlọ ọrụ dịka SistemuLife, yana otu o sirila rụọ ọrụ Advanced Automation System Solutions nke nyeerela ụlọ ọrụ mgbasa ozi aka ịmalite. Na GPX-32 Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi & Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi bụ ezigbo ihe atụ nke otu usoro njikwa ọdịnaya si arụ ọrụ nke ọma maka ndị na-emepụta ọdịnaya, ọkachasị mgbe ọdịnaya ọhụrụ na-enye ume ọhụrụ na-achọ mgbe niile. Inwe ngwaọrụ nke na-enye ohere ka ndị ọkachamara mgbasa ozi nwee ike ijikwa, nyochaa ma na-ejikwa ọdịnaya ha anaghị eme ka usoro nhazi nke ya dị mfe, mana ọ na-emekwa ka ohere ha dị n'iwulite ndị na-ege ntị buru ibu ma na-agbasawanye.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara SuiteLife Systems, gaa www.suitelifesystems.com/.
Axess sọftụwia Usoro Axess Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi & Nlekọta Mgbasa Ozi Mgbasa ozi content GPX-32 Pro ITgba ajụjụ IT nlekota na ịchịkwa ngwọta NOC osisa usoro njikwa ike njikwa ụlọ maara ihe / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Ngwọta Akụrụngwa Automation na-ewu ewu Systems SuiteLife Ultra HD Forum interface ụwa Ngosi Injinia ngosi ihe ngosi 2020-04-28
Previous: Ikikere ọkara nke DejaEdit na-agbasa rue ngwụcha July -
Osote: Igwefoto Pliant Technlogies nke 'SmartBoom' na-eweta nkwalite ngwa ngwa maka Sistem Intercom ọ bụla